आमयुवाले यसबाट केही सिक्नुपर्छ - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
आमयुवाले यसबाट केही सिक्नुपर्छ
कुनै क्षेत्रमा राम्रो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकियो भने त्यसको परिणाम कति उत्कृष्ट हुँदो रहेछ भन्ने राम्रो उदाहरण यो हो (फ्रन्टपेज : टिनएजमै करोडपति) । आमयुवाले यसबाट केही सिक्नुपर्छ ।
नेपालमा घुम्नलायक थुपै्र ठाउँ छन् (गरौं बिदाको सदुपयोग) । बिदाका बेला अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई घुमाएर धेरै कुरा सिकाउन सक्छन् । आफूले पनि नयाँ–नयाँ ठाउँका बारेमा ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ ।
कतिपय निर्दोषहरू पनि कारागारमा थुनिएका छन् (मंगल होस् : कारागार होइन सुधारगृह) । कारागारमा थुनिएका व्यक्तिहरू मानसिक रूपमा प्रताडित छन् । उनीहरूलाई राम्रो काममा पनि लगाउन सकिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको मनस्थिति परिवर्तन गर्न सकियोस् ।
कतिपय च्यानलले राम्रा सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् (युट्युबमा टाइमपास च्यानल) । भारतीय युट्युबरहरूको च्यानलमा सिर्जनशीलता देखिन्छ । विशेष गरी अमित भदानाजस्ता युट्युबर निकै चर्चित भैसकेका छन् ।
सिंगो देशले प्रश्न उठाएको छ, तैपनि हत्यारा पत्ता लाग्दैन (यात्रा सन्दर्भ : यस्तै हो भने पूरै देश तात्नेछ) । बोल्न नसक्ने, आवाज उठाउन नसक्नेहरूको अवस्था कस्तो होला ? कानुन कमजोर र निर्धाहरूका लागि मात्र हो कि ? दोषीलाई किन कानुनको दायरामा ल्याइँदैन ?
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले भन्नुभएको कुरा त भाषण र नारामा मात्र सीमित छ (अन्तवार्ता : भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा संलग्न कसैले पनि छुट पाउँदैनन्) । व्यवहारमा लागू हुने हो भने त यो कुरा दोहोर्‍याउनै पर्दैनथ्यो ।
पुराना अभिनेता सरोज खनालजस्ता व्यक्तित्वले एक्टिङ स्कुल खोल्नु निकै राम्रो कुरा हो (खनालले खोले एक्टिङ स्कुल) । अभिनय क्षेत्रमा रुचि हुने र सिक्न चाहने युवाहरूलाई यो स्कुलले पक्कै फाइदा पुर्‍याउनेछ ।
कलाकारहरूको व्यस्तता बढ्नु राम्रै हो (कोही विदेश त कोही घरभित्रै) । बिदाको मौकामा परदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नु तथा आफूले पनि कमाइ गरेर जीवनस्तर उकास्नु राम्रै हो ।
यस्तो कुरा पढ्दा मन खिन्न हुन्छ (निर्देशकको चित्त दुखेपछि) । सम्बन्ध भनेको लामो समयसम्म कायम रहनुपर्छ । स्वार्थले जोडिएको सम्बन्ध दीर्घकालीन हँुदैन ।
विदेशमा कुनै एवार्ड समारोह गर्नुभन्दा नेपालकै पर्यटकिय स्थलमा गरे कसो होला ? (दुबईमा मोडल सङ्स एवार्ड) । त्यसले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ ।
मिस्टर नेपाल वल्र्ड–२०१८ को उपाधि हात पारेकोमा विकल्प राज श्रेष्ठलाई बधाई छ । तपाईको प्रतिभा समाज र राष्ट्रका लागि लगाउनुहोस् ।
जुवासम्बन्धी केही मिथक